Eshibhile CNC izingxenye zethusi ifektri kanye nabaphakeli | I-Ouzhan
I-Brass ingxubevange eyakhiwe ngethusi ne-zinc, futhi iyinto ekahle yokukhiqiza izingxenye zomshini ze-CNC (kufaka phakathi izingxenye ze-CNC ezifinyiwe).
Brass CNC Milling-ngokunemba zethusi izingxenye zokugaya
I-Brass CNC milling ukubeka eyodwa noma isiqeshana sepuleti othini lokuphotha ngezansi kontonga, kanti uthi lokuphotha lunamathuluzi okusika. Izici zemishini yokusika nazo zivelele kakhulu kunezinto zethusi. Ishubhu yethusi engenamthungo ekhishwe ngethusi ithambile futhi inokuqina kokuqina kokugqoka. Izakhi zokugaya ngokunemba ekusetshenzisweni kwe-CNC kwezinsizakalo zethusi zilungele imishini yezimboni, ikhaya elihlakaniphile, ukuxhumana namakhompyutha.
Izinzuzo Shanghai Ouzhan zethusi Milling izingxenye
- Kuhlala isikhathi eside
- Ukumelana nokuqina okuqinile
- ductility Okuhle
- Nezimo anti-ukugqwala
- Kulula ukubunjwa
- Amandla aqine kakhulu, anti-rust
Isevisi yokugaya i-OEM eyenziwe ngokwezifiso-China Shanghai Ouzhan CNC izingxenye zethusi zokugaya izingxenye zomkhiqizi
I-Ouzhan ngumkhiqizi ohlanganisa imboni kanye nezohwebo, enikezela ngosizo olulodwa lokuguqula nokwenza izinsizakalo zomshini wokugaya umshini. Ngokuya ngezidingo zamakhasimende, izingxenye ezinemba kakhulu ze-CNC zokugaya zethusi ezinekhwalithi ezinzile nethembekile zingacutshungulwa. Lezi zingxenye zemishini zenziwa kusetshenziswa izinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu zokusetshenziswa, ezitholakala kubahlinzeki bezingxenye ezisebenza kahle emakethe. Ithimba lethu lobuchwepheshe eliqinile nelingcweti kanye nokuphathwa kahle nokusebenza kwesistimu kungaqinisekisa ukukhiqizwa okuphelele kwezingxenye zomshini wethusi. Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo yethusi ye-CNC egayiwe inikeze ngokuqinile izindinganiso zekhwalithi futhi ingasetshenziswa ezinhlelweni ezahlukahlukene zezimboni. Futhi singahlinzeka ngamanani entengo wokuncintisana ngemikhiqizo yethusi ye-CNC yokugaya kumakhasimende ethu abalulekile.
Ukusetshenziswa zethusi Milling izingxenye
Ezokwelapha nezokwenza imithi, ezezimoto, ezempi, ezehadiwe, amathoyizi, ezokuxhumana ngocingo, njll. Izingxenye ze-Precision zethusi ze-CNC ezisetshenziswayo zingasetshenziswa nakwezinto zasendlini, ezobunjiniyela nezobunjiniyela bamapayipi.
Izinzuzo zensizakalo yokugaya yethusi ye-Ouzhan
- Yonke imikhiqizo yethusi ecolisisiwe ye-CNC ingaphansi kokuhlolwa kwekhwalithi eqinile.
- Isevisi yokuveza i-OEM ingaqinisekisa ukuthi uthola imikhiqizo oyifunayo, ukusekela i-DDP, i-CIF, i-FOB nezinye izindlela zokukhokha zokuhamba ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende angazithola izimpahla ngokuphepha.
- Ngokuya ngemidwebo noma amasampula wokwenza ngokunemba izingxenye zethusi zokugaya.
- Emkhakheni wezinsimbi zethusi, inzuzo yethu enkulu ukukhiqizwa kwezinto zethusi, ama-valves ebhola, njll., Futhi sinokubambisana okuseduze nezinkampani ezinkulu eYurophu, eSouth Korea, Thailand, njll.
Langaphambilini Ngokwezifiso ishidi lensimbi izingxenye
Olandelayo: Kwenziwe ngentando insimbi engagqwali ukuvula izingxenye ezicubungula imishini izingxenye
Kwenziwe ngentando electroplated zethusi Milling izingxenye pr ...